अग्लो भी’रमा फोटो सुट गर्दै गर्दा श्रीमानले छोडे श्रीमतीको हात. – Butwal 24 News
September 16, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on अग्लो भी’रमा फोटो सुट गर्दै गर्दा श्रीमानले छोडे श्रीमतीको हात.
साहसिक कुराहरु मन पराउने एक नवविवाहित दम्पतीले आफ्नो वैवाहिक फोटोसुटका लागि अग्लो ढुंगाको टुप्पामा पोज दिएका छन् । कोरोनाका कारण आफ्नो विवाह भव्य बनाउन नपाएपछि उनीहरुले यो साहसिक तरिका रोजेका हुन् ।
अमेरिकाको अर्कन्सास राज्यको माउन्टेन होमका ३० वर्षका र्यान र २८ वर्षकी स्काइ मायर्सले आफनो विवाह भव्य बनाउन चाहेका थिए तर कोरोनाको प्रतिबन्धका कारण योजना बदल्नुपरेको थियो ।त्यसपछि यी साहसी जोडीले आफ्नो विवाहको खुसीयाली हक्सबिल क्रागमा साहसिक फोटोसुट गरेर मनाउने निर्णय गरे ।
द सनका अनुसार यी दुईका फोटोहरु फोटोग्राफर मेसन गार्डनरले खिचेका हुन् । र्यानका अनुसार उनीहरु ४ वर्षभन्दा धेरै समयदेखि साथमा थिए । गएको जूनमा उनले अब आफू स्काइसँग बिहे गर्नको लागि अझै लामो समय प्रतिक्षा गर्न नसक्ने कुरा स्काइलाई बताएका थिए।
उनीहरु भव्य बिहे चाहन्थे तर स्काइले नर्सिङको पढाइ सुरु गरेकोले उनीहरुसँग समय थिएन । त्यसमाथि प्रतिबन्धका कारण उनीहरुले यो तरिका सोचेका थिए । जुन उनीहरूको साहासिक तस्बिर अहिले संसाभर भाइरल बनेको छ ।